Guddiga la-dagaallanka musuqmaasuqa ayaa su'aalo waydiiyay Kimemia - Sabahionline.com
Guddiga la-dagaallanka musuqmaasuqa ayaa su'aalo waydiiyay Kimemia
Guddiga barlamaanka Kenya ee maamulka iyo amniga qaranka ayaa Isniintii (27-kii Maajo) waxa uu su'aalo la xiriira eedeeymo musuq-maasuq wax ka waydiiyay Madaxa Shaqaalaha Dawladda Francis Kimemia, sidaana waxa sheegay Daily nation-ka Kenya.
Kenya oo qoraysa 7,000 oo bilays ah ka hor doorashooyinka
Xukuumada Kenya oo warbixinta ugaarsiga ka dalbatay adeegga duur-joogta
Guddi sare ee caafimaad Kenya oo shaqadii laga hakiyey eedayn si xun wax u maamulid ah awgeed
Komishanka Akhlaaqiyaadka iyo La-dagaallanka Musuqmaasuqa Kenya ayaa guddiga u soo gudbiyay warbixin arrinka ku xiriirinaysa Kimemia. Komishanka ayaa hadda laga filayaa in uu qoro warbixin ku saabsan sida uu Kimemia munaasibka ugu yahay xafiiska kadibna u gudbiyo barlamaanka todoba maalmood guduhood.
Su'aalihii la waydiiyay mas'uulka Isniintii ayaa daba socda fadhi baaritaan ah oo dhacay Jimcihii halkaa oo uu Kimemia uga jawaabay su'aalo khuseeya hufnaantiisa iyo dhaqankiisa xafiiska. Kimemia ayaa lagu eedeeyay in uu u xagliyay Isbahaysiga Jubilee intii lagu jiray doorashooyinkii guud, taas oo uu beeniyay.